I-Chicken pie - Iresiphi | Indlela yokupheka
UAlicia tomero | 30/10/2021 17:54 | Iimenyu zabantwana, Iresiphi, Ukupheka kwenkukhu
Ezi zincinci iikeyiki ezinencasa wobathanda. Zenziwe ngothando oluninzi ukuze wenze i-empanadas enesiqingatha kwiingqayi kwaye zihle. Ukuzaliswa kwayo kuneyona nto iphambili Inkukhu kunye nemifuno, kunye nentlama ekhethekileyo ukuze iphelele kunye ne ipeyistri yokutshaya. Unesibindi sokuzama, zahlukile kwaye zimnandi.
Ukuba uthanda iiresiphi ngokuzaliswa, ungazama ukwenza ezethu. 'ipanekuku enetapile kunye nenyama ecoliweyo'.
Ixesha lokulungiselela: 45 m
1 itswele encinci
2 iicephe eziluhlaza okanye efriziwe eertyisi
Isiqingatha senkukhu yesifuba
Iitipuni ezi-2 zombona ophekiweyo
Iipuniwe ezi-2 zomgubo wengqolowa
1 iglasi yobisi olupheleleyo
1 iphepha le-pastry
1 iqanda lokubrasha
Sisika kakuhle itswele zibe ngamaqhekeza amancinci. Sihlamba kwaye sixovule iminqathe kunye ne siya kunqunyulwa zibe ziingceba. Sithulula ioli yeoli kwi-pan ebanzi yokucoca kwaye xa kushushu songeza i-anyanisi kunye ne-karoti. Siyiyeke iqhotse umzuzu.
Sinqumle inkukhu encinci enedayisis kwaye udibanise kwi-sauce, yongeza ityuwa kunye nepepile emnyama.
Sidibanisa iiertyisi kunye nombona kwaye uyivumele ipheke kunye imizuzu embalwa.
Sifaka iipunipopu ezimbini ze uflawa wengqolowa kwaye siyinika amaxesha ambalwa ukupheka.
Siphosa ubisi, Sivumela ukuba sitshise imizuzwana embalwa kwaye siqala ukujika ukuze i-compact mass yenziwe.
Sibeka inhlama esiyifake kwiimbumba ezizimeleyo ezinokungena kwi-oven.
Silungiselela ipeyistri yokutshaya, ukusika ezinye izikwere ezincinci ezigubungela iimbumba apho ukuzaliswa kwethu kuya kuhamba khona.
Sigubungela ikepusi emile iimbumba kunye ne-puff pastry kwaye uyihombise ngomgca omncinci. Senza ezinye amanxeba amancinci angamaxantathu ukwenzela ukuba intlama ibonakale xa uyipheka ehovini. Ukubetha iqanda kunye nebrashi phezu kwe-puff pastry. Siza kuyibeka kwi-oven kunye nokufudumala kunye nokuhla I-180 ° imizuzu engama-15. Xa ziphekiwe singaziphakela zishushu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziya » Iimenyu zabantwana » Iphayi yenkukhu